ဓါးမိုးပြီးသာသနာဖြန့်ခဲ့တဲ့အတွက်အစ္စလာမ်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးဘာသာပါလို့ဘယ်လို လုပ် ခေါ် ဆိုနိုင် မှာ လဲ? | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဓါးမိုးပြီးသာသနာဖြန့်ခဲ့တဲ့အတွက်အစ္စလာမ်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးဘာသာပါလို့ဘယ်လို လုပ် ခေါ် ဆိုနိုင် မှာ လဲ?
ဓါးမိုးပြီး သာသနာ ဖြန့်ခဲ့တဲ့အတွက် အစ္စလာမ်ကို ငြိမ်းချမ်းရေး ဘာသာပါလို့ ဘယ်လိုလုပ် ခေါ်ဆိုနိုင်မှာလဲ?
ဓါးမိုးပြီး သာသနာ ဖြန့်ခဲ့တဲ့အတွက် အစ္စလာမ်ကို ငြိမ်းချမ်းရေး ဘာသာတရားလို့ ဘယ်လိုလုပ် ခေါ်ဆိုနိုင်မှာလဲ?
မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူတချို့ကြားမှာဘ၀င်မကျစွာနဲ့ ပြောဆိုဝေဖန်လာကြတဲ့သူအချို့က မဖြန့်ချီခဲ့ပါဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီသာသနာကို ယုံကြည်သူ သန်းပေါင်းများစွာရှိရတာလဲ ဆိုတဲ့ စောဒကတက်လာကြပါတယ်။
ဓါးမိုးပြီး သာသနာပြုတာမဟုတ်တဲ့ အကြောင်းကို အောက်ပါအချက်အလက်တွေကရှင်းလင်းသွားစေမှာပါ။
အစ္စလာမ် အလျင်အမြန် ကြီးထွားပြန့်ပွားလာရတာကတော့ သစ္စာတရား၊ ဆင်ခြင်တုံတရာကျပြီး ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံမှုနဲ့ ယုတ္တိဗေဒဆိုတဲ့ ရှိရင်းစွဲ အင်အားကြောင့်သာ လက်ခံယုံကြည်သူ များလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) အစ္စလာမ်သည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆိုလိုသည်။
အစ္စလာမ်က စလာမ်ဆိုတဲ့ရင်းမြစ် ဝေါဟာရက လာပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။မိမိရဲ့အလိုကို အလ္လာဟ့်အရှင်ရဲ့ထံတော်မှာလုံးဝ ယုံပုံ၊ အပ်နှံ၊ ကျိုးနွံခြင်းလို့လဲ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်အစ္စလာမ်ကငြိမ်းချမ်းရေးဘာသာတရား ဖြစ်တယ်။
ဒီအတွက် အချုပ်အချာဖြစ်တဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့ အလိုတော်အတိုင်းမိမိရဲ့အလိုကို ကျိုးနွံပုံအပ်ခြင်း ဖြစ်သွားဖို့လိုပါတယ်။
(၂) တစ်ခါတစ်ရံ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် အင်အားသုံးရပါသည်။
ဒီကမ္ဘာမှာ လူတိုင်းလူတိုင်းက ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ စိတ်သဘောထား ညီညွှတ်မှုကိုတည်စေလိုကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်ကျိုး၊ စီးပွားသက်သက်ကို ကြည့်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖျက်လို၊ဖျက်ဆီး ပြုနေတဲ့သူတွေ အများကြီးပဲ။
တခါတရံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် အင်အားကို သုံးကြရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းခံနဲ့ကွက်တိဖြစ်အောင်လို့ နိုင်ငံအတွင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် ရာဇ၀တ်ကောင်များနဲ့ လူမှုဝန်းကျင်ကို ဖျက်လို၊ ဖျက်ဆီးပြုနေကြမှုကို ဆန့်ကျင်နှိပ်နင်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးရဲတွေကိုဖွဲ့စည်းထားကြရတာပါ။ အစ္စလာမ်က ငြိမ်းချမ်းရေးကို အားပေးတယ်။တိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အစ္စလာမ်က ယင်းရဲ့အယူဝင်တွေကိုဖိနှိပ်ညှင်းပမ်း မတရာပြုမှုတွေ ကြီးစိုးလာနေရင်တော့ တိုက်ပွဲဝင် တွန်းလှန်သွားဖို့ပဲနှိုးဆော်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးကျတော့ မတရားဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့က အင်အားသုံးဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ဒါကလဲ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တရားမျှတမှုကို တိုးမြှင့်သွားစေဖို့အတွက်ကိုသာ သုံးစွဲရတာမျိုးပါ။
(၃) သမိုင်းပညာရှင် ဒီလာစီအိုလီယာရီ၏အမြင်
အစ္စလာမ်က ဓါးမိုးပြီးသာသနာပြုခဲ့တာပဲရယ်လို့ အထင်အမြင် လွဲမှာနေမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ သမိုင်းပညာရှင် ဒီလာစီအိုလီယာရီရေးသားတဲ့ (Islam at the Cross Road)(လမ်းခွဆုံမှ အစ္စလာမ်ဘာသာ) စာအုပ် စာမျက်နှာ(၈)မှာ ရေးသားထားချက်ကအကောင်းဆုံး ဖြေကြားချက်ပါပဲ။
“သမိုင်းအရ အရှင်းကြီးရှင်းနေတာကတော့အယူသီး မွတ်စလင်တွေက ဓါးမိုးပြီး မတရားနည်းနဲ့ ကမ္ဘာတစ်လွှားက လူတွေကို အောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဆိုနေပြောနေခြင်းဟာ သမိုင်းဆရာများဘက်က ထပ်ပြန်တလဲလဲ အလွန်အကျူး၊ ဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင်ချေ မရှိဆုံးသော ဒဏ္ဍာရီယုံတမ်းစကားကြီးကို ဆိုနေတာပဲ ဖြစ်ပါသတဲ့” ခင်ဗျား။
(၄) မွတ်စလင်တို့သည် စပိန်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း (၈၀၀) တိုင်အုပ်စိုးခဲ့သည်။
မွတ်စလင်မ်တွေဟာ စပိန်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း(၈၀၀)တိုင် အုပ်စိုးသွားခဲ့တယ်။ စပိန်က မွတ်စလင်မ်တွေဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေအစ္စလာမ်ကို ကူးပြောင်းလက်ခံလာရေးအတွက် ဘယ်တုံးကမှ ဓါးမိုးပြီး အတင်းအဓမ္မ မပြုခဲ့ကြပါဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ ခရူးဆိတ်ဝါဒီ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေ စပိန်ကိုဝင်ရောက်လာရော မွတ်စလင်မ်တွေကို မောင်နှင်ထုတ်ပစ်တော့တာပါပဲ။
၀တ်ပြုရန် ဆင့်ခေါ်တဲ့ အဇာန်ကြွေးကြော်သံကိုတောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေးမဲ့ မွတ်စလင်မ်ဆိုလို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်တောင်မှ မရှိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
(၅) ၁၄ သန်းသော အာရဗ်များသည် ကော့ပတစ်ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။
မွတ်စလင်မ်များဟာအာရေဗျအရှင်သခင်များ ဖြစ်ခဲ့ကြတာဟာ နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ ရှိခဲ့ပြီလေ။ အာရေဗျကိုနှစ်အနည်းငယ် ဗြိတိသျှတို့က ကြီးစိုးခဲ့ပြီး ပြင်သစ်တို့ကလည်းနှစ်အနည်းငယ် အုပ်စိုးခဲ့ကြတယ်။
ခြုံပြီးပြောရရင် မွတ်စလင်မ်တွေ အာရေဗျကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တာက နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဒီနေ့ထိမျိုးရိုးစဉ်ဆက်ခရစ်ယာန်ဖြစ်နေသေးတဲ့ ကော့ပတစ်ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြတဲ့ အာရဗ်လူမျိုးကဒီဒေသမှာ ၁၄သန်း ရှိနေပါတယ်။ တကယ်လို့ မွတ်စလင်မ်တွေကသာဓါးမိုးပြီး သာသနာပြုခဲ့မယ်ဆိုရင် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဆိုတဲ့ အာရဗ်လူမျိုးတစ်ယောက်ကိုတောင် မှ တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
(၆) အိန္ဒိယတွင် မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူဦးရေက သန်း၈၀ ကျော်ရှိသည်။
မွတ်စလင်မ်တွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးကို နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ခန့် အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။သူတို့သာ ဆန္ဒရှိခဲ့ရင် အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ မွတ်စလင်မ် မဟုတ်တဲ့သူတွေကိုတစ်ဦးမကျန် အစ္စလာမ်ဘာသာကိုကူးပြောင်းလက်ခံကြရမယ်ဆိုပြီးအင်အားသုံးကာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ဆို အိန္ဒိယမှာ လူပေါင်း သန်း ၈၀ ကျော်ဟာမွတ်စလင်မ် မဟုတ်တဲ့သူတွေပဲ။ အဲ့ဒီမွတ်စလင်မ် မဟုတ်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားအားလုံးက အစ္စလာမ်ကဓါးမိုးသာသနာပြုခဲ့တာ မဟုတ်ကြောင်းကိုသက်သေခံနေကြပါတယ်။
(၇) အင်ဒိုနီးရှား နှင့် မလေးရှား
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာမှာမွတ်စလင်မ်လူဦးရေအများဆုံး နိုင်ငံကြီး တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ဆိုရင်လည်းလူများစုကြီးက မွတ်စလင်မ်များ ဖြစ်ကြပါတယ်။ဘယ်မွတ်စလင်မ် စစ်တပ်ကြီးကများအင်ဒိုနီးရှားနဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံတို့ကိုရောက်ခဲ့သတုံးဗျလို့ တစ်ဦးဦးအနေနဲ့ မေးတောင်မေးနိုင်မှာလား။ လုံးဝ ရောက်မှမရောက်ခဲ့ဘဲ။
(၈) အာဖရိက အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းဒေသ
အလားတူပဲ အစ္စလာမ်ဟာ အာဖရိကအရှေ့ကမ်းရိုးတန်း ဒေသမှာပဲ အလျင်အမြန်ပြန့်ပွားသွားခဲ့ရတာပါ။ကဲ… ဒီမှာလဲပဲတစ်ဦးဦးအနေနဲ့ “အာဖရိကအရှေ့ကမ်းရိုးတန်းဒေသကိုဘယ်မွတ် စလင်မ် စစ်တပ်ကြီးကများသွားရောက်ခဲ့ပါသလဲ”လို့ ထပ်ပြီးမေးမယ်ဆို မေးလို့ရပါသေးတယ်။ ရောက်မှမရောက်ခဲ့ဘဲ။
(၉) သောမတ်(စ်) ကာလိုင်း(လ်)
ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ သမိုင်းပညာရှင်ကြီးသောမတ်(စ်)ကာလိုင်း(လ်)က သူရေးတဲ့ Heroes and Hero Worship(သူရဲကောင်းများနဲ့ သူရဲကောင်းကိုးကွယ်မှု)ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ “ဓါး.ဟုတ်လား?ဒီဓါးကို ဘယ်က ရတာလဲ? အမြင်သစ် အယူအဆအသစ်ကို တင်ပြတိုင်း တင်ပြတိုင်းအစပိုင်းမှာဆို လက်ခံသူက လူနည်းစုမှလူနည်းစုပဲ။လူတစ်ဦးရဲ့ခေါင်းကနေပဲ တွက်ခဲ့ရတာပါ။ဒါကထုံးစံပဲ။ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးမှာတစ်ဦးတည်းပဲ ယုံကြည်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လဲဒီတစ်ခုတည်းကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူတွေက၀ိုင်းပြီးဆန့်ကျင် ကြမှာပဲ။
ဒီတော့သူကဓါးဆွဲပြီးဒါကိုဖြန့်ချီဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရင်လဲ သူ့အတွက်က မဆိုသလောက်လေးသာ လုပ်နိုင်မှာပါ။သင့်အနေနဲ့ ဓါးကတော့ထားထားရမှာပဲ။ ခြုံပြီးကြည့်ရင် အချင်းအရာတစ်ရပ်က သူ့သဘော သူ ဆောင်ပြီးမှသာပြန့်ပွားသွားရတာမျိုးပါ”တဲ့။
ဒါကတော့အစ္စလာမ်ကို ဓါးမိုးပြီးဖြန့်ချီခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဒီအထင်မှား အမြင်မှားအချက်နဲ့ ပက်သတ်လို့ သူ့ဖက်ကရည်ညွှန်းပြီး ရေးသားသွားခဲ့ပါတယ်။
(၁၀) ဘာသာတရားတွင် အဓမ္မမှု မရှိစေရ
ဒါဆို အစ္စလာမ်ကဘာဓါးနဲ့ပြန့်ပွားသွားခဲ့ရတာလဲ။မွတ်စလင်မ်တွေမှာ ဓါးရှိနေရင်တောင်မှ အစ္စလာမ်ပြန့်ပွားသွားအောင် ဖြန့်ချီရေးမှာ ဒါကိုသုံးလို့ မရပါဘူး။ကုရ်အာန်က အခုလို ဆိုထားလို့ပါပဲ။
“ဘာသာရေးတွင် အဓမ္မမှုမရှိစေရ။သစ္စာအမှန်တရားသည် မိစ္ဆာအယူမှ လုံးလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီး
ကွဲကွဲပြားပြားကြီး ရှိနေချေသည်” (ကုရ်အာန် – ၂း၁၅၆)
(၁၁) အသိဥာဏ်ရဲ့ ဓါး
ဒီ “ဓါး” ကတော့ “အသိဥာဏ်” ဆိုတဲ့ “ဓါး”ပါပဲ။
လူတွေရဲ့နှလုံးသားတွေနဲ့ စိတ်တို့ကို အောင်နိုင်တာက “အသိဉာဏ်” ပဲလေ။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် စူရာဟ် နဟလ် (စူရာဟ်၁၆၊ ပါဒ ၁၂၅)မှာဆို ထားတာက “အသင်တို့၏အရှင်သခင်ရဲ့ လမ်းစဉ်ကို အသိအလိမ္မာ ဉာဏ်ပညာနှင့် စုံမက်ဖွယ်ရာဟောပြောပို့ချ ချက်နှင့် (အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ကြကုန်၊ သူတို့တတွေနှင့် အကောင်းဆုံးနှင့် အယဉ်ကျေးဆုံးအဖွယ်ရာဆုံး နည်းလမ်းများဖြင့်အခြေ အတင်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြကုန်”ပါတဲ့ ခင်ဗျား။
(၁၂) ကမ္ဘာ့ဘာသာတရားများတွင် ၁၉၃၄ ခုနှစ်မှ၁၉၈၄ ခုနှစ်အထိ နှစ်ငါးဆယ်ကာလအတွင်းမှာယုံကြည်သူဦးရေ တိုးပွားလာမှု
ရီးဒါးဒိုင်ဂျက်(စ်) မဂ္ဂဇင်းကြီးရဲ့ ၁၉၈၆ခုနှစ်ရဲ့လက်စွဲစာအုပ်ထဲကဆောင်းပါးတစ်ခုမှာ ၁၉၃၄ ခုနှစ်မှာ၁၉၈၄ ခုနှစ်အထိ ရာစုနှစ်ဝက်အတွင်းမှာကမ္ဘာ့အဓိက ဘာသာတရားကြီးများရဲ့ လူဦးရေတိုးတက်မှုစာရင်းဇယားကို တွက်ချက်ပြထားပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးကို ပလိန်းထရုသ် (The Plane Truth) ဆိုတဲ့မဂ္ဂဇင်းမှာလည်း ထပ်ထည့်ထားပါတယ်။တိုးနှုန်း အမြင့်ဆုံးက အစ္စလာမ်ပဲ။ ၂၃၅ရာခိုင်နှုန်းထိ တိုးတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာတရာက၄၇ ရာခိုင်နှုန်းပဲ တိုးပါတယ်။
ကဲ… ကျွန်တော်မေးပြီ။ ဒီရာစုနှစ်ကြီးမှာဘယ်စစ်ပွဲကြီးတွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ လူတွေသန်းပေါင်းများစွာကိုဘာသာပြောင်းသွားစေခဲ့ရတာလဲ။
(၁၃) အမေရိကနှင့် ဥရောပတို့တွင်ကြီးထွားနှုန်း အမြန်ဆုံးသော ဘာသာတရားမှာအစ္စလာမ်ဖြစ်သည်။
ဒီကနေ့ဆို အမေရိကမှာ ကြီးထွားနှုန်းအမြန်ဆုံးသော ဘာသာတရားကြီး ဖြစ်နေသလိုဥရောပမှာ ကြီးထွားနှုန်းအမြန်ဆုံးသော ဘာသာတရားကလည်း အစ္စလာမ်ပါပဲ။ အနောက်တိုင်းကလူပေါင်းများစွာကအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံလာခဲ့ကြရတာဟာ ဘယ်ဓါးနဲ့ ဘယ်အင်အားသုံးခဲ့လို့ပါလဲ။
(၁၄) ဒေါက်တာ ဂျိုးဇက် အဒမ် ပီယားဆင်
ဒေါက်တာ ဂျိုးဇက် အဒမ် ပီယားဆင်အမှန်အကန်ပြောဖို့ သွားခဲ့တာက“အာရဗ်တွေရဲ့ လက်ထဲမှာသာတစ်နေ့ နျူကလီးယားဗုံးတွေရောက်သွားခဲ့ပြီဆိုပြီး အစိုးရိမ်ကြီးနေတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။ ဒီလူတွေဟာတမန်တော် မုဟမ္မဒ် (PBUH) ကိုယ်တော် ဖွားသန့်စင်တော်မူတဲ့နေ့ကတည်းက “အစ္စလာမ်”ဆိုတဲ့ ဗုံးကြီးကျဲချပြီးခဲ့ပြီဆိုတာကိုမမြင်လိုက်ကြတဲ့သူတွေပဲ” တဲ့။
← ပသီဇော်မင်းထွန်းမှ နေမျိုးဝေသို့ ချေပစာ	အနာဂတ်အတွက် ရဲရဲတောက် အစ္စလာမ်ဇာနည်များ →